प्राधिकरण सुधारमा हिरो ड्राइभिङ मोडेल - UrjaKhabar प्राधिकरण सुधारमा हिरो ड्राइभिङ मोडेल - UrjaKhabar
प्राधिकरण सुधारमा हिरो ड्राइभिङ मोडेल
काठमाडाैं । कुनै चलचित्रको कल्पना गरौं ,जहाँको परिस्थिति भयकंर समस्याबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । परिस्थिति असामान्य बनिरहेको हुन्छ । सबै समस्याबाट अतालिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो समयमा चलचित्र हेरिरहेका दर्शकदीर्घामा पनि सन्नाटा छाउँछ । उनीहरूको मुटुको धड्कन पनि बढ्दै जान्छ ।
अब के होला ? कसो होला ? समस्या समाधान होला कि नहोला ? यस्तै मनोवृत्तिबाट दर्शकदीर्घामा बस्नेहरू अतालिरहेका हुन्छन् । चलचित्रमा जब एक व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ र समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्छ तब सबैमा उत्साहको वातावरण सिर्जना हुन्छ । समस्या समाधान गर्ने व्यक्ति चलचित्रमा हिरो अर्थात् नायकको रूपमा स्थापित हुन्छ ।
माथि उल्लेखित चलचित्रको परिवेशजस्तै चार वर्ष अगाडि विद्युतको मामलामा नेपालको परिस्थिति अनुकूल थिएन । त्यतिबेला जनताले करिब ८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ खेप्दै थिए । विद्युत् प्राधिकरण घाटामा थियो । तत्कालीन व्यवस्थापन थप लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्दै बसेको थियो ।
लोडसेडिङका कारण अमुक उद्योग बाहेक धेरै उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका थिए । देशमा ऊर्जा संकटको घोषणा भएको थियो । यस्तै परिवेशको बीचमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमानको आगमन भयाे ।
अनेकन समस्याले जकडिएको प्राधिकरणमा उनको आगमनलाई अस्वभाविक रूपमा लिँदै सुरुमा विरोध गरियो । उनले विरोधकैबीचमा समस्यासँग जुध्न सुरु गरे । २०७३ कात्तिक लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौंमा विद्युत् कटाैती गरिएन । यसले सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्याे ।
यो काम नै कुलमान र प्राधिकरणका लागि ठूलो टर्निङ पोइन्ट बन्याे । भलै, विगतदेखि भएका पूर्वाधार निर्माण र सुधारकाे परिणाम एकपछि अर्काे देखिँदै थियाे । लाेडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकार र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माकाे अठाेट पनि थियाे । यही कामले कुलमानलाई हिरोको रूपमा अगाडि सारियाे ।
काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्यपछि यो कार्य देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाइयाे । र, सफल पनि भयो । त्यसपछि जनताको सामु कुलमान एक हिरोको रुपमा स्थापित भए, बनाइयाे पनि । जनताको अपार समर्थनसहित हिरोको रूपमा उदाएका कुलमानले समस्याको समाधानका लागि सबै समस्याग्रस्त क्षेत्रमा रणनीतिक हस्तक्षेप गरे जसले देखिने गरी परिणाम प्राप्त भयो ।
लोडसेडिङ अन्त्य, चुहावट नियन्त्रण र प्राधिकरण नाफामा जानु महत्त्वपूर्ण परिणाम मानियाे । यी परिणाम प्राप्त हुँदा कुलमानले एक हिरोको रूपमा इमानदार प्रयत्न गरेका छन् जुन प्रशंसायोग्य छ ।एक इमानदार व्यक्तिको अथक प्रयासले प्राधिकरणको समग्र सुधार भएकोले संगठन सुधारका लागि एक व्यक्ति नै काफी हो कि भन्ने आमधारणा जबर्जस्त विकास भएको छ ।
हिरो ड्राइभिङ मोडेलले व्यक्तिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने, नतिजा पनि देखिने तर संगठनको पद्धति सुधार छाँयामा पर्न सक्छ । यसाे हुँदा प्राप्त उपलब्धि संगठनमा हिरो रहुन्जेलमात्र रहन्छन् कि भन्ने त्रास रहन्छ । यदि, संगठनको पद्दति सुधार संस्थागत भइसकेको छ भने जुनसुकै पात्र संगठनको नेतृत्वमा आए पनि प्राप्त उपलब्धि गुम्दैनन् । प्राप्त उपलब्धिको जगमा थप काम गर्न सहज हुन्छ ।
प्राधिकरणमा हिरो ड्राइभिङ मोडेलले अपेक्षित नतिजा दिएको छ तर सुधारहरूको आन्तरिकिकरण पूर्ण रूपमा भएको छैन । त्यसैले प्राप्त उपललब्धि हिरोको बहिर्गमन भएमा गुम्छन् कि भन्ने त्रास आम नागरिकमा रहेको पाइन्छ जुन स्वभाविक हो ।
आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न, प्राप्त परिणामको रक्षा एवं पद्धति सुधारसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणमा अब हिरो ड्राइभिङ र सिस्टम ड्राइभिङ दुवै मोडेलको प्रयोग गरिनुपर्छ । जसले परिणामहरू दिगो हुनुका साथै संस्था नतिजामुलक र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । संगठन सिस्टममा चल्न थाल्यो भने व्यक्ति गौंड हुन्छ । जस्तो परिस्थितिमा पनि संगठन सहज र नतिजामुलक ढंगवाट चल्छ । जुन आजको आवश्यकता हो ।